Ny tena fifidianana filoham-pirenena
Ny dingana amin'ny fifidianana amerikana - rahoviana no hamaritana ny filoha amerikana vaovao?
Matetika ny fanontaniana dia apetraka any Alemana ny amin'ny fomba ahafahana tena lasa filoham-pirenena amerikana, ilay lehilahy manana ny lazany ho lehilahy matanjaka indrindra eran'izao tontolo izao, na dia tsy azon'ny mponina iray aza ny ankamaroan'ny vato azon'ny mponina.
Ny rafi-pifidianana amerikana
Ity zava-misy ity dia mety ho sarotra takarina amin'ny olona manana ny fomba fijerintsika eoropeanina momba ny demokrasia, saingy tamin'ny 2016 farafaharatsiny dia voaporofo indray fa mety ho zava-misy marina tokoa izany any Etazonia. Fa inona marina no ao ambadik'izany, ahoana no niavian'ny rafi-pifidianana amerikana ary ahoana no fomba fiasa amin'ny ankapobeny?
Kaody sy mpifidy faritra voalohany - Ahoana ny fomba fiasan'ny fifidianana ho an'ny filoham-pirenena amerikana?
Alohan'ny ahafahan'ny filoha vaovao mifindra ao amin'ny White House, misy lalana lava sy sarotra aleha. Satria amin'ny maha laika na tsy amerikanina anao dia matetika no manana olana amin'ny Fomba fijery amin'ny rafitry ny fifidianana an'ny USA, lozika ny fandinihana tsikelikely ireo dingana rehetra:
Fepetran'ireo kandidà ho filoham-pirenena
Mba hanombohana ny fizotrany mankany amin'ny fifidianana dia tokony ho tapa-kevitra ny mpirotsaka hofidina, ary iza amin'ireo no afaka misafidy amin'ny filaharana manaraka. Fa ahoana no fisafidianana ireo kandidà? Raha te hijoro amin'ny maha kandidà anao dia tsy maintsy mahafeno ny fepetra telo amin'ny fifidianana an'i Etazonia ianao: ny Amerikanina kandidà dia 35 taona farafahakeliny fony izy ireo nanomboka ny fifidianana ary farafaharatsiny 14 taona. talohan'ny nipetrahan'ny fifidianana tany Etazonia. Raha ampy ny mpifaninana hita mahafeno ireo fepetra takiana ireo dia tsy maintsy esorina aminy ny mpifaninana manokana sy mety indrindra.
Izany dia atao amin'ny alàlan'ny préfiks: Eto no atolotra ny mpilatsaka hofidina avy amin'ny antoko samihafa (fomban-drazana ny Demokraty sy ny Repoblika). Ny fifidianana voalohany dia atao amin'ny tapany voalohany amin'ny taom-pifidianana, mandritra izany fotoana izany dia voafidy ireo solontena avy amin'ny antokony tompon'andraikitra isan-tsokajiny, ary izy ireo no mamaritra ny kandidà filoham-pirenena farany amin'ny antoko misy azy ireo amin'ny alàlan'ny latsa-bato maro an'isa.
Ny sasany amin'ireo kaody faritra dia tena iray "Talata Super" fe-potoana iray - mazàna izany dia manodidina ny volana martsa amin'ny vanim-potoana mialoha ny fifidianana. Ny ankabeazan'ny fifidianana ambaratonga voalohany dia tanterahina anio, ka betsaka ny vato azon'ny solontena voangona noho ny tamin'ny andro fifidianana voalohany rehetra. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, ny kandidà misongadina indrindra amin'ny Super talata dia izy ihany koa no tena nirahina ho any amin'ny hazakazaka ho kandida ho an'ny antoko tsirairay avy.
Ny dingana voalohany mankany amin'ny tena izy Fifidianana filoham-pirenena dia izany ve ny olon'ny mpifidy ao anaty iray Register mila misoratra anarana vao afaka mandatsa-bato raha vao miandry ny fifidianana. Saingy tsy tena manazava azy io: ny zon'ny mpifidy any Etazonia dia miovaova arakaraka ny fanjakana tsy fanamiana voafehy.
Any amin'ny fanjakana sasany, ny latsa-bato dia tsy maintsy apetraka amin'ny latsa-bato, amin'ny sasany kosa ny fisoratana anarana efa voalaza. Na izany aza, raha hadinon'ny olom-pirenena iray ny hidirana ao aminy ara-potoana dia mbola afaka mandatsa-bato ihany izy. Na ho hita fa mitombina izany dia ho fantatra aorian'ny fifidianana. Somary manjavozavo kely ny zava-drehetra, saingy io no fizotran'ny fifidianana amin'ny fomba fijerin'ny olom-pirenena.
Ny dingana manaraka dia ny fifidianana filoham-pirenena tena izy. Ho an'ny eropeana iray dia vita tanteraka ny fihetsika mifidy taorian'ny fifidianana sy ny fanisam-bato ny harivan'io ihany. Any Etazonia anefa, ny filoha dia tsy fidin'ny vahoaka mivantana, fa ny filankevitra momba ny fifidianana na ny oniversite amin'ny fifidianana no mitondra azy. Kolejim-pifidianana.
maty mpifidy ny Electoral College amin'ny farany mifidy ny filoha vaovao. Izany dia atao amin'ny latsa-bato miafina, 41 andro aorian'ny daty ofisialin'ny fifidianana. Ny fanjakana amerikana dia manana iray isan'ny mpifidy isan-karazanyiza no afaka mandatsa-bato raha tsy jerena izay hetahetan'ny mponina. Io isa io dia miova arakaraka ny Ny hakitroky ny mponina an'ny fanjakana tsirairay avy: Kalifornia lehibe sy be mponina dia manana mpifidy 55 mirehareha, ny New York 29 manan-kery ary ny fanjakana kely kokoa Wyoming na South Dakota dia 3 ihany.
Raha fintinina: ny valiny farany ary amin'izany ny filoham-pirenena amerikana vaovao dia ho fantatra raha vantany vao hahalala ny iray amin'ireo kandidà roa ireo Ankamaroan'ny vato mpifidy 270 farafaharatsiny mahazo. Ny kolejim-pifidianana dia vokatry ny latsa-bato nataon'ny olom-pirenena amerikana ary misy mpifidy 538 avy amin'ny fanjakana. Ny latsa-bato miafina ataon'ireo mpifidy dia isain'ny Kaongresy amin'ny fiandohan'ny volana Janoary. Mitombina ny valiny raha vantany vao nahazo ny maro an'isa tanteraka ny iray amin'ireo mpifaninana (ny vaton'ny mpifidy fa tsy ny safidim-bahoaka na olom-pirenena). Io fanisana ny vatom-pifidianana io no valiny mamatotra.
Rehefa tapa-kevitra ny filoham-pirenena amerikana, ny fanomanana Mianiana nanomboka. Nandritra ny fianianana, izany hoe ny fitokanana, ny filoha voafidy ao amin'ny Capitol renivohitra Washington DC dia Ny fianianan'ny birao abgelegt und auch feierlich die Rede zum Amtsantritt gehalten.
Bei diesem Eid wird folgender Wortlaut geschworen: "Izaho, (ny anarana filoham-pirenena vaovao), dia mianiana mafy fa hotanterahiko amin'ny fomba mahatoky ny biraon'ny filoham-pirenena amerikana ary hotohizako, hiarovako ary hiarovako ny lalam-panorenan'ny Etazonia araka izay tratry ny heriko." Aorian'io fianianana momba ny lalàm-panorenana io, ny filoha dia nanao kabary izay matetika no nanasongadinana ny tanjony sy ny antony manosika azy amin'ny ahiahin'ny vahoaka. Avy eo dia manomboka ny matso sy ny lanonana fankalazana ho fanomezam-boninahitra ny filoha vaovao.
Antsipiriany ara-tantara - maninona no toy izany ny fifidianana amerikana?
Any Etazonia, ny fitsipika sy fomba fanao amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia mifototra amin'ny hetsika sy famaritana ara-tantara. Ny lalàm-panorenana no fototra lehibe indrindra sy manan-danja indrindra hananganana fanapahan-kevitra rehetra. Ny amin'ny 17 septambra 1787 lasa manan-kery ny lalàm-panorenana, nanomboka teo dia nametraka ny lamina fototra ho an'ny politika sy ny lalàna. Ny lahatsoratra ao amin'ny lalàm-panorenana dia mamaritra ny zava-misy rehetra mifandraika amin'izany momba ny andrim-panjakana mpanao lalàna, ara-pitsarana ary koa mpanatanteraka. Der Präsident ist das Organ der Exekutive, dieses ist im Artikel 2 der Urverfassung ausführlich dargestellt.
Pejy fandokoana ny angano angonin-gana